UKUNYAMEKELA IINDEVU 101-UYIGCINA NJANI IINDEVU NGENDLELA EYIYO - UHLOBO
Ukunyamekela iindevu 101-Uyigcina njani iindevu ngendlela eyiyo
I-ndevu ye-avareji ikhula ngenqanaba lesiqingatha semilimitha ngemini kwaye inomyinge weenwele ezizodwa ezingama-25,000.
Ngelixa ubuhlanga, amanqanaba ehomoni kunye nempilo yakho iyadlala indima kwimpilo kunye namandla eendevu zakho, ukunqongophala kokuzilungisa ngendlela efanelekileyo kunokubangela ukucaphuka kolusu, iinwele ezonakeleyo kunye nokubonakala okungafunekiyo.
Ukuba ufuna ukukhula iindevu zodidi kodwa uhlala uchetyiwe ngokudana emva kweentsuku ezimbalwa okanye awunakubonakala ngathi uthambisa iinwele zakho zobuso, nazi iingcebiso zokufumana inkangeleko oyifunayo.
Ziqhelanise nezitayile zeendevu
Kukho uluhlu olukhulu lwe Izimbo zeenwele zobuso ungakuthathela ingqalelo ukuwela phantsi kwesigama 'seendevu'. Amadoda amaninzi ayayeka kwiinzame zawo zokukhulisa iindevu kuba akazilungisi kwaphela iinwele kwaye ngokukhawuleza aqokelela intshebe ye-bushman efanele u-Grizzly Adams.
Ukuba nombono wento ongathanda ukuyifeza ngeenwele zakho zobuso kuya kwenza ukuba ufumane iziphumo ozifuna lula.
Cinga ngobuhlanga bakho
imipu kunye neeroses ii-tatoos kubantu basetyhini
Amadoda anokhokho baseYurophu, ngakumbi ngeenxa zonke kwiMeditera, bahlala benenwele zobuso ezingqindilili ezinokuthi zibe zihlazo kwaye zirhawuzelele. Amadoda angama-Asiya, amaNative / ama-Aboriginal okanye amaLatino okhokho banokudana ngenxa yeenwele ezincinci. Ukuba ufuna ukukhula kweendevu zakho, zama ukusebenza ngesakhelo esikunikiweyo zofuzo.
Ukuba epheleleyo iindevu zibukeka zirhabaxa okanye bushy, jonga ezinye iindlela ezinje ngeVan Dyke okanye intshebe eneebhokisi ezimfutshane. Ukuba awukhulanga iindevu kakuhle, ibhokhwe okanye isitayile somtya wesilevu kunokuba ngcono. Kulabo banethamsanqa ngokwaneleyo ukuba babe ngokuthe tye, iindevu ezizeleyo, iZZ Phezulu ngumda!
I-Beard Shampoo kunye neConditioner
Ngoku ukuba unendlela ethile engqondweni, ulwazi malunga nokuhlamba iindevu ezifanelekileyo kunye nemeko yokubaluleka kubalulekile. Umgaqo wokuqala ukukhula kweendevu ? Sukusebenzisa ishampu kunye nesilungisi osisebenzisa entlokweni yakho ukuhlamba iindevu zakho. Ulusu lobuso bakho lubuthathaka, lubhityile kwaye lutyekele ekucaphukeni kuneso sentloko yakho, kwaye neenwele zeendevu zinokuba buthathaka ngakumbi kuneenwele zentloko.
IiTattoo zomqolo wamaTshayina kunye neentsingiselo
I-shampoo ye-Scalp inokuzomisa iifollic, yenza eyakho Iindevu ziyarhawuzelela yakho kwaye ayinyamezeleki njengoboya bentsimbi kwiqabane lakho. Sebenzisa indawo yokucoca imeko efanelekileyo IViking Revolution Umdli weendevu ukuhlamba iindevu zakho amatyeli ambalwa ngeveki. Ukuba uyatshaya, ubile kakhulu emsebenzini okanye utya ukutya okungcolileyo, kungafuneka uhlambe kwaye ulungise intshebe yakho rhoqo ukunqanda amabala okanye ivumba elibi.
I-Beard Oils, i-Balms kunye ne-Butters
Ezi mveliso zenzelwe ukongeza ukufuma kwaye, okona kubaluleke kakhulu, tshixa ukufuma ukugcina iinwele zakho zobuso zithambile kwaye zilawuleka. Ukuba unesifo sokudumba okanye isikhumba kwiindevu zakho, ibhalsam elungileyo inokunceda ukuthambisa ulusu kwaye ingakhuthazi ukubhabha.
Okuncinci kwezi mveliso kuhamba ixesha elide, ke uya kufuna ukuzisebenzisa kancinci kwaye ucime nakuphi na ukugqitha ngetawuli ethambileyo. Ukuba wena okanye iqabane lakho unesifo se-asthma, i-allergies okanye ezinye izinto ezithandekayo, uya kufuna ukukhetha enye engenayo iphunga elinamandla.
Bona i eziphezulu ze-13 zeoyile zeoyile kunye nalapho ungazithenga khona .
Izixhobo eziBalulekileyo zokuKhathalela iindevu
Kuxhomekeka kuhlobo lweenwele zakho kunye nesimbo seendevu ofuna ukusinxiba, kuya kufuneka utyale imali kwezinye izixhobo ezikumgangatho ophezulu zokugcina iinwele zobuso bakho. Ngelixa eyona ndlela ibiza kakhulu ayisoloko iyeyona ibalaseleyo, izinto ezingabizi zihlala zingafikeleli kulindelo lwakho.
Isikere. Uya kufuna isikere esenzelwe ukusika iinwele. Ukuba unesandla sasekhohlo, ukuthenga isikere esenzelwe wena njengesikere esisekunene asiyi kukunika ukusika okuhle. Insimbi engenasici yinto elungileyo, kwaye iintlobo zaseJapan zixatyiswa phakathi kweenwele kunye neenwele zezinwele. Ezi skisi zokucheba iinwele zaseJapan inokuba lukhetho olufanelekileyo.
Ikama yokudibanisa.Olu hlobo lwekama lukhangeleka lufana nekomityi encinci onokuyiphatha kwizinwele zakho zentloko. Ngelixa iplastikhi ilungile, ufuna ukunqanda iikhombi ezingabizi kakhulu ezinomphetho ombi kunye neebristles eziqinileyo njengoko oku kungonakalisa iifollic hair.
Iinkuni kunye nentsimbi zezona zikhetho zibalaseleyo. Soloko ukama iindevu zakho ngobunono, njengoko ukugoba ikama kunokwenza naziphi na amaqhina abe mandundu kwaye kunokuzonakalisa. Ukuba ukhulisa iindevu ezinde, soloko ukama ukusuka ezantsi kwaye usebenze uye ebusweni bakho xa uphazamisa.
Ikama lokugqibela.Unamazinyo amancinci kwaye mncinci kunesixokelelwano esinqumlayo, sebenzisa ikama lokugqibela ukususa ii-divots kwaye uqeqeshe amagqabi akho obuso kwimilo oyifunayo. Ukuba iindevu zakho zinotyekelo lokuqunjana nasemva kokuba uziphazamise, ikama yokugqibezela iyakushiya iindevu zakho zipholisiwe ngakumbi kunye ne-urbane. Le comb evela eOster lukhetho olufanelekileyo.
Usuku lweengcamango ze tattoo ezifile
Umgangatho woKhuseleko lweRazor.Ngaphandle kokuba ucwangcisa ukubonakala 'kwendalo yonke' okanye usikelelwe ngephethini egqibeleleyo yeendevu, kuya kufuneka ukuba uzincothule iindevu zakho phantsi komhlathi wakho, entanyeni kwaye, nasezidleleni. Sebenzisa i-blade ebukhali ukwenza umda ochanekileyo, ukuba kukho imfuneko.
Isicoci sombane.Ukuba ufuna iindevu ezimfutshane, ukunciphisa isikere kuphela kunokuchitha ixesha. Gcina imali kwi umgangatho wokusika umbane kunye neendidi ezahlukeneyo zabalindi. Oonogada baya kukuvumela ukuba ukhethe ubude obufunayo kwaye unciphise iindevu zakho ngokukhawuleza.
Isipili esaseludongeni.Ukuzama ukwenza konke ukulungiswa kweendevu ngelixa uncike phezu kwesinki akunakukhathazeka. Beka isipili eseludongeni ukuze ukwazi ukusondela kuso kwaye ubone ukuba wenza ntoni ngokulula. Oku kubalulekile ukuba wabelana ngendlu yangasese nabanye kwaye awufuni kuyilawula.
Ukwazi ixesha lokuCoca
Umntu ngamnye uya kuba namava ahlukeneyo ngokucheba, ngokusekwe ekukhuleni kweenwele zakho ngokukhawuleza, ukuba zonakaliswe ngokulula kangakanani kunye nembonakalo oyifunayo. Xa uqala ukukhulisa iindevu zakho, unokufuna ukuyicheba kube kanye ngeveki de ikhule ukuya kubude obufunekayo kunye nokuzala, emva kweeveki ezimbini emva koko.
Ewe, lungisa le shedyuli ukuba uphawula ukuba ukukhula kwakho akuhambisani nokucheba okanye awonelisekanga bubume beenwele zakho zobuso. Ungaze unqumle iinwele zobuso xa zimanzi, njengoko unokuphazamiseka xa ufumanisa ukuba uzimfutshane kangakanani xa zisoma. Ukuba unenkathazo yokucheba, umchebi wakho unokucheba iindevu zakho.
Xa Lixesha Lokucheba
Ngelixa uninzi lwamadoda lunxiba iindevu unyaka wonke, utsheva kuba iinyanga ezishushu zasehlotyeni aziqhelekanga kwaphela. Ukususa iindevu zakho, qala ngokucheba kufutshane ngesikere okanye ngombane. Thatha ishawa eshushu okanye ubeke itawuli efudumeleyo, emanzi ebusweni bakho ukuthambisa iinwele. Sebenzisa i-cream yokucheba esemgangathweni, thambisa iindiza kwaye uchebe njengesiqhelo.
Ukucheba kwakho okokuqala ngekhe kungahambi kakuhle njengoko ubulindele. Sukwenza impazamo yokucheba ngaphezulu, kuba oku kungakhokelela ekucaphukiseni nasezinweleni ezingene ngaphakathi.
Njengazo naziphi na iinwele zomzimba, ukuzilungisa kubalulekile kwinkangeleko enomtsalane. Ukukhulisa nokugcina iindevu kunokuba ngumceli mngeni kuluntu lwethu oluchetyiweyo. Ngokulandela ezi ngcebiso kunye namaqhinga, unokufumana isitayile seendevu esikufanelayo kwaye usikhathalele ngokufanelekileyo.
eyona gun ilungileyo kwabaqalayo
onxiba ntoni ngeebhutsi madoda
udonga lwesitayile senqanawa ekhitshini
Ukhakhayi lwenkunzi eneentyatyambo umvambo
iimpahla ezintsha zefashoni zamadoda
Iiroses ezibomvu umvambo engalweni